Cunto: Websaytka ugu fiican ee soo jiidanaya si looga dhigo xogta internetka
Maqnaanshaha mawduucyada ama wiishka webka waa habka isticmaalka software gaar ah ama dalbka webka si ay u soo uruuriyaan content ka soo website. Raadinta rafcaannada webmasters iyo kuwa sameeya kuwa doonaya in ay helaan feejignaan si dhakhso ah ufilan macluumaadka ku yaal meelaha kale.
Codsiyada Maqalka Macluumaadka
Burburinta shabakada waxaa lagu sameyn karaa si xun u adeegsiga suuq-geynta emailka, isbaarada , iyo weriyeyaasha. Sidaa darted, inta badan websaydhku waxay door bidaan in ay ka fogaadaan. Si kastaba ha noqotee, haddii la sameeyo cirifka shabakada eeyaha ah waxay noqon kartaa hab aad u awood badan oo ka faa'iideysan kara mashaariic kala duwan.
Sidee loo Isticmaali Karaa
Waxaan ka fekereynaa buugga online ee dhammaan hoteelada aagga. Haddii uu website-ka soo saaruhu doonayo inuu isku daro mid kasta iyo hudheel kasta, isaga ama iyadu waa inay ku daraan diiwaanka manhajka. Nidaamkani wuxuu caadi ahaan qaataa tobanaan kun oo saacadood si loo hubiyo in huteel kasta oo dalka ka mid ah lagu daro. Iyada oo ah shabaqa websaydh ah , webmaster isku mid ah ayaa ku darsan kara weydiimaha raadinta isla markaana ururin kara xogta si toos ah laga soo galo meelo kala duwan.
Dhisida ama iibso Web Wareegtey?
Haddii aad rabto qalab duuban shabakadda, waxaad ka dhisi kartaa mid ka mid ah xoqid ama isticmaali mid hore u jirey. Horumarinta intooda badan ma laha xirfadaha lagama maarmaanka ah, aqoonta, qalabyada, ama khayraadka si loo dhiso aaladda qalabka xoqidda gacanta. Warka wanaagsani wuxuu yahay in ay jiraan daraasado horay loo soo dhejiyay oo online ah.
Hababka & Tababarrada loo Isticmaalo Barnaamijka Kaydinta Webka
Haddii aad doonayso inaad dhisto xaansho gaar ah, waxaad u baahan tahay inaad fahamto waxa tiknoolijiyada ku lug leh xog ururinta. Sawirada badankooda waxaa lagu dhejiyaa HTML, adigoo isticmaalaya DOM isku-dhejinta (kala-soocida qaabka waraaqaha qoraalka) si aad ugu xayeysiiso HTML-ka si looga dhigo macluumaadka la doonayo. Waa inaad gartaa divs, spans, class, iyo liiska xogta aad rabto inaad xoqto oo ku soo gasho goobahaaga.